Buy Wearable Towel (15,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် မျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးကို Rocket တွင်
လတ်တလောတွင် အစိမ်းရောင် တစ်မျိုးတည်းသာ
ကမ်းခြေသွားဖို.၊ ရေကူးဖို.၊ ရေချိုးပြီး ခဏလောက် ဝတ်ဖို.
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ. အဆင်ပြေမယ့် Towel လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူးဖုံးလေး ဖြစ်တာမို. လူကြီးသူကောင်းတွေ အဆင်ပြေစေမယ့်
Wearable towel လေးကို အခုပင် မကုန်ခင်
၂ပေခွဲ x ၅ပေ = 15000 kyats
၂ပေခွဲ x ၅ပေခွဲ = 20000 kyats
အမည်: Wearable Towel